Kenya: Xisbiga ODM oo dowladda ka dalbaday iney ciidamada ka saarto Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi – Mareeg.com: Xisbiga mucaaridka ah ee Kenya ee lagu magacaabo Orange Democratic Movement (ODM) ayaa ka dalbaday dowladda Kenya iney la timaado khariirad cad oo ciidamada looga saarayo dalka Soomaaliya, sidaa waxaa qoray wargeyska The Standrd ee kazoo baxa Nairobi.
Ku-simaha hogaamiyaha xisbiga ODM, Anyang’ Nyong’o ayaa u sheegay The Standrd iney xilligaan markale ku qasabnyihiin iney dowladda xilka heysa ee Kenya ka dalbadaan iney ciidamada kazoo saarto Soomaaliya.
Sii hayaha xilka gudoomiyaha xisbiga ODM ee Kenya, Anyang’ Nyong’o ayaa sheegay in Kenya ay dhibaato kala kulantay gelutaankeedii dalka Soomaaliya, isagoo xusay in dalku noqday meel amaanku kasii xumaanyo, kadib markii saida uu yiri ay milateriga Kenya galeen Soomaaliya oo ah meel soo jeedata argagixisada.
Anyang’ Nyong’o ayaa ku eedeeyey dowladda Kenya ee uu taladeeda hayo xisbiga Jubilee ineysan wax u qaban dadka Kenyanka ah ee dadiikii ay jeclaayeen ku waayey dagaalka Soomaaliya iyo weerarada ka dhaca gudaha Kenya.
Xalay iyo habeen hore ayaa qaraxyo sababay dhimasho iyo dhaawac ka dahceen magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa ee dalka Kenya.
Bishii October ee sanadkii 2011 ayaa ciidamada Kenya gudaha u galeen Soomaaliya, iyagoo sheegayey iney la dagaallamayaan Alshabaab oo weeraro ka geystay dalkooda, hase ahaatee weeraradii ayaa sii laxaadsaday.
Gaas oo Sanca kula kulmay madaxweynaha iyo Raysul Wasaaraha Yemen